पुरुष भर्जिन छ/छैन यसरी थाहा पाउन सकिन्छ « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
पुरुष भर्जिन छ/छैन यसरी थाहा पाउन सकिन्छ
काठमाडौं, २६ वैशाख । त्यो दिन गयो जतिबेला मात्र महिलाको कुमारित्वका बारेमा प्रश्न सोधिन्थ्यो । उनको चरित्रलाई उनको कुमारित्व अझ भनौ विवाहको पहिलो दिन बगेको रगतको आधारमा तय गरिन्थ्यो । बिस्तारै शिक्षित बन्दै गएको समाज, खुल्दै र आत्मनिर्भर बन्दै गएका महिलाहरुले पुरुषको भर्जिनिटीको बारेमा पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
यहाँ ती पाँच संकेत उल्लेख गरिएको छ जसको माध्यमबाट महिलाले आफ्नो पुरुष पार्टर भर्जिन छ कि छैन थाहा पाउन सक्नेछन् ।
1. के गर्ने केही थाहा नहुनु
यदि तपाई कुनै यस्तो पुरुषका साथमा हुनुहुन्छ, जसलाई थाहा छैन कि बेडमा के गर्ने हो, कसरी सुरु गर्ने हो, तपाईलाई नाङ्गो देखेर उ हडबडाइरहेको छ भने पनि पूरै सम्भावना रहन्छ कि तपाईको पार्टनर भर्जिन छ । किनभने अनुभवी पुरुष यसप्रकारको व्यवहार देखाउँदैनन् ।
2. फोरप्लेका बारेमा थाहा नहुनु
यदि तपाई यौन क्रियाका क्रममा पूर्णरुपमा आत्मसन्तुष्टि चाहनु हुनछ भने यसमा फोरप्लेले सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । यदि तपाईको पार्टनरलाई फोरप्लेका बारेमा केही पनि थाहा छैन भने हुन सक्छ उ पहिलोपटक यौन सम्पर्क गरिरहेको छ । त्यसैले यसलाई यसबारे कुनै जानकारी छैन।
3. अनजान व्यवहार गर्नु
यदि तपाईको पार्टनर बेडमा कुनै प्रकारको कुराकानी गरिरहेको छैन भने यो पुरुष भर्जिन भएको उत्तम संकेत हो । नयाँ पार्टनर्सका साथ अक्सर मानिसहरुलाई विचित्र महशुस हुन्छ । तर यदि तपाईको पार्टनर तपाईलाई नाङ्गै देखेर विचित्र महशुस गरिरहेको छ भने यसको मतलब उ पहिलोपटक सेक्स गर्दैछ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
4. तत्काल अर्गेज्म
यौन सम्पर्कका क्रममा हुने अर्गेज्म, हस्तमैथुनका क्रममा हुने अर्गेज्मभन्दा कयौ बढी इन्टेस हुन्छ । यस्तोमा यदि कुनै पुरुष भर्जिन छ भने उसलाई निकै चाँडो र अनियन्त्रित अर्गेज्म महशुस हुन्छ । यदि तपाई कुनै यस्तो पुरुषसँग डेट गरिरहनु भएको छ जो चाँडै चरमोत्कर्षमा पुग्दछ, त्यसो हो भने सम्भावना छ कि उक्त पुरुष भर्जिन छ ।
5. यदि निस्कियो रगत
हो, तपाई सही सुन्नु भयो । मात्र महिलाहरुकै होइन, पहिलोपटक यौन सम्पर्कका क्रममा कतिपय अवस्थामा पुरुषको पनि रगत निस्कन्छ । त्यसो त त्यस्ता पुरुष निकै कम हुन्छन् तर कतिपय अवस्थामा जुन पुरुषको फोरस्किन टाइट हुन्छ, उनीहरुको पहिलो इन्टरकोर्सका क्रममा रगत निस्कन्छ । यसक्रममा निकै बढी रगत त निस्कँदैन तर केही थोपा देखिन सक्छ ।